Usoro na ọnọdụ maka ụlọ ahịa - Regwọ Ọrụ .gwọ
Home Usoro na ọnọdụ maka Sholọ Ahịa ahụ
Akụzi Nkuzi Nkuzi
Ojiji nke ihe enyere ikike (dika akowara ya n’okpuru) dabere n’okpuru Usoro na onodu ndi no n’ime Ikike Nkuzi Ihe Nkuzi (“Ikike” a). Akwụkwọ ikike a bụ nkwekọrịta na-ejide iwu n'etiti gị na Regwọ Ọrụ ingwọ maka njikọ gị nke ihe ikikere. Site na iji Ihe ensed ikikere ị kwadoro na ị nabatara Usoro na Ọnọdụ n'okpuru Ikikere a ma kwenye na ha ga-agbachi. Biko gụọ Usoro na Ọnọdụ n'okpuru Ikike a nke ọma.
1. Okwu mmalite.
1.1 Usoro na Ọnọdụ ndị a ga-achịkwa ire na ntinye nke ihe ndị a na-ebudata na webụsaịtị anyị. Ha na-ekpuchikwa ihe eji eme ihe ndị ahụ.
1.2 A ga-ajụ gị ka ị nye nkwekọrịta nkwupụta gị na Usoro na Ọnọdụ ndị a tupu ị nye iwu na weebụsaịtị anyị.
1.3 Akwụkwọ a anaghị emetụta ikike ọ bụla iwu kwadoro ịnwere ike ịbụ dị ka onye na-azụ ahịa.
1.4 Amụma nzuzo anyị nwere ike ịbụ elele ebe a.
1.5. Kwenyere na isiokwu dị n'ime nkuzi ahụ nwere ike iyi ihe na-adịghị mma nye ụfọdụ ndị. O kwuru banyere omume mmekọahụ. Anyị emeela usoro ezi uche niile iji hụ na anaghị egosi ihe ọ bụla na-akpali agụụ mmekọahụ. Anyị achọpụtakwala na asụsụ ahụ dabara na ihe ụmụaka na-atụle. Site na ịnabata Usoro na Ọnọdụ ndị a ị na-anabata ihe egwu maka nsogbu ma ọ bụ obi ọjọọ ọ bụla nwere ike ibilite na nkwadebe nkuzi ma ọ bụ nnyefe ya.
1.6 Maka izere obi abụọ, Ikike a iji ihe ndị a anaghị enyefe ndị nwe ihe ikikere.
2.1 Na Usoro ndị a:
(a) “anyị” pụtara The Reward Foundation, otu Scottish Charitable Incorporated Organisation n'okpuru iwu nke Scotland nwere ọrụ ebere SCO44948. Lọ ọrụ anyị edebanyere aha bụ: Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh EH2 2PR, Scotland, United Kingdom. (na "anyị na" anyị "kwesịrị ịkọwa ya);
(b) “gị” pụtara onye ahịa anyị ma ọ bụ onye ga - achọ ịbụ onye ahịa n’okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a (yana “nke gị” kwesiri ịkọwa ya);
(c) “ihe ndi ozo” putara ihe ndi ozo di maka izuta ma obu nbudata na ebe nrụọrụ weebụ anyi;
(d) “ihe omume gị” pụtara ụdị ihe ọ bụla dị otú ahụ ị zụtara ma ọ bụ budata n'efu na weebụsaịtị anyị. Nke a na-agụnye ụdị nkwalite ọ bụla emelitere ma ọ bụ kwalite nke anyị nwere ike ịme ka ị nweta site n'oge ruo n'oge;
(e) “Ikike” bu ihe putara na mbu okwu a. na
(f) “Ihe enyere ikike” pụtara ọrụ nka ma ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ, onyonyo, vidiyo ma ọ bụ ndekọ ọdịyo, nchekwa data, na / ma ọ bụ ihe ndị ọzọ Akwụkwọ ikike nyere gị iji mee ihe n’okpuru Ikike a. Licensor pụtara Foundationgwọ Ọrụ ,gwọ, Scotttù Scottish Charitable Incorporated Organisation n'okpuru iwu Scotland nwere nọmba ọrụ ebere SCO44948. Lọ ọrụ anyị edebanyere aha bụ: Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh EH2 2PR, Scotland, United Kingdom.
(g) “Onyinye N’aka nke Onwe” putara ikike nke mmadu zutara, ma o bu nnabata na-efu n'efu, maka ojiji nke nkuzi ha. Enweghi ike ibunye ya ndi ozo, na ulo akwukwo ma obu ulo oru.
(h) "Akwụkwọ ikike ọtụtụ ndị ọrụ" bụ Ikike azụrụ, ma ọ bụ nnabata na n'efu, nke ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịpụta maka iji ụlọ ọrụ wepụta ọrụ agụmakwụkwọ.
3. Nhazi usoro
3.1 Mgbasa ozi nke ihe ndị dị na weebụsaịtị anyị bụ "ọkpụkpọ òkù ịgwọ" karịa onyinye nkwekọrịta.
3.2 Ọ dịghị nkwekọrịta ọ bụla ga-abata n'etiti anyị na gị belụsọ ma ruo mgbe anyị nabatara iwu gị. Nke a ga-agbaso usoro esi depụta na Nkebi nke 3 a.
3.3 enterbanye na nkwekọrịta site na weebụsaịtị anyị iji zụta ma ọ bụ nweta ihe omume nwere ike ibudata n'aka anyị, a ga-emerịrị usoro ndị a. Must ga-agbakwunye ihe omume ịchọrọ ịzụrụ na nkata ịzụ ahịa gị, wee gaa na ndenye ọpụpụ; ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa ọhụrụ, ị nwere nhọrọ iji mepụta akaụntụ na anyị wee banye; maka ndị ahịa nkeonwe, Akaụntụ bụ nhọrọ, mana ha bụ iwu maka ndị ahịa ụlọ ọrụ; ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa dị, ị ga-etinyerịrị nkọwa nbanye gị; ozugbo ị banyere, ị ga-ekwenye na usoro nke akwụkwọ a; a ga-ebufe gị na ebe nrụọrụ weebụ na-eweta ọrụ ịkwụ ụgwọ anyị, ndị na-eweta ọrụ ịkwụ ụgwọ ga-ejikwa ịkwụ ụgwọ gị; anyị ga-ezitere gị nkwenye iwu. N'ebe a iwu gị ga-abụ nkwekọrịta nkwekọrịta. N'aka nke ọzọ, anyị ga-ekwenye site na email na anyị enweghị ike iru iwu gị.
3.4 will ga-enwe ohere ịchọpụta ma dozie mperi ndenye ihe tupu ị nye iwu gị.
4.1 Ahịa anyị dị ka e hotara na weebụsaịtị anyị. Ebe ọnụahịa dị ka £ 0.00, ikikere ka ga-adị, n'agbanyeghị na enweghị ego ga-akwụ ụgwọ maka ya.
4.2 Anyị ga-agbanwe site n'oge ruo n'oge na-agbanwe ọnụahịa ndị e hotara na weebụsaịtị anyị. Nke a agaghị emetụta nkwekọrịta ndị batara na mbụ.
4.3 Ego niile ekwuru na Usoro na Ọnọdụ ndị a ma ọ bụ na weebụsaịtị anyị ka ekwuputara na VAT. Anyị anaghị akwụ ụgwọ VAT.
4.4 Ọnụ ego egosiri maka nkuzi ọ bụla ma ọ bụ ngwungwu ọ bụla bụ maka mmadụ ịzụta License maka ojiji nke ha.
4.5 Ebe ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ chọrọ ịzụrụ ma ọ bụ nweta nbudata nke akụrụngwa anyị, ha ga-azụta Akwụkwọ Ikike Onye Ọrụ. A na-akwụ ụgwọ nke a na oge 3.0 n'otu n'otu Ikike ya. Enwere ike iji ya n'ime ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ yana enweghị njikọta ya na onye nkuzi ọ bụla ma ọ bụ onye otu ndị ọrụ. Ebe enyere onyinye ihe n'efu, onye nnọchi anya na-azụta ego n'efu maka ụlọ akwụkwọ, nzukọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ka kwesịrị ịhọrọ ikikere ọtụtụ ndị ọrụ iji hụ na e guzobere mmekọrịta iwu kwesịrị ekwesị n'etiti Regwọ Ọrụ andgwọ na onye nwere ikikere.
5. Nkwụ ụgwọ
5.1 must ghaghi, n'oge usoro ndenye ọpụpụ, kwụọ ụgwọ nke ihe omume ị na-enye. Ọnụahịa ahọpụtara ga-adịrịrịrịrịrị ụdị ụdị Ikike ahọpụtara, Ikike Onwe Onye ma ọ bụ Ikike Onye Ọrụ Ọtụtụ.
5.2 Enwere ike ịkwụ ụgwọ site n'ụzọ nke ikikere akọwapụtara na weebụsaịtị anyị site n'oge ruo n'oge. Ugbu a, anyị na-anara ụgwọ naanị site na PayPal, ọ bụ ezie na nke a na-enye ohere iji kredit niile na kaadị akwụmụgwọ.
6. Inye ikikere ihe omuma
6.1 Anyị ga-enye gị ihe ọmụmụ gị n'ụdị ma ọ bụ usoro akọwapụtara na weebụsaịtị anyị. Anyị ga-eme nke ahụ n'ụzọ dị otu a na n'ime oge ndị ahụ akọwapụtara na weebụsaịtị anyị. Ke ofụri ofụri, nnyefe nke email ikwe download bụ fọrọ nke nta ozugbo.
6.2 N'okpuru ịkwụ ụgwọ gị nke ọnụahịa bara uru yana nnabata na Usoro na Ọnọdụ ndị a, anyị na-enye gị ikikere zuru ụwa ọnụ, na-anaghị agwụ agwụ, na-abụghị naanị, na-enweghị ike ịfefe iji mee ihe ọ bụla nke ihe ọmụmụ gị nke Nkebi 6.3 kwere, na-enye na ị gaghị etinye n'ọnọdụ ọ bụla iji usoro ihe eji eme ihe nke machibidoro Nkebi 6.4.
6.3 Ihe eji enyere gi aka ime ihe gi bu:
(a) nbudata otu akwukwo ihe omuma gi;
(b) maka ikikere ndị mmadụ n'otu n'otu: n'ihe metụtara ederede na eserese nke eserese: ịme, ịchekwa ma lelee nnomi nke ihe ọmụmụ gị na ihe karịrị 3 desktọọpụ, laptọọpụ ma ọ bụ kọmpụta akwụkwọ ndetu, ndị na-agụ ebook, smartphones, kọmputa tablet ma ọ bụ ngwaọrụ ndị yiri ya;
(c) maka ikikere nke Multi-User: n'ihe metụtara ihe ederede na eserese: ime, ịchekwa na ịlele nnomi nke ihe ọmụmụ gị na ihe karịrị 9 desktọọpụ, laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa ndetu, ndị na-agụ ebook, smartphones, kọmputa tablet ma ọ bụ ngwaọrụ ndị yiri ya. ;
(d) maka ikikere ndi mmadu: n'ihe gbasara ihe ndi odiyo na ihe nlere: imeputa, ichekwa na iguputa akwukwo ihe omumu gi karie 3 desktọọpụ, laptọọpụ ma ọ bụ kọmpụta akwụkwọ, ekwentị, kọmpụta kọmputa, kọmputa egwuregwu ma ọ bụ ngwaọrụ ndị yiri ya;
(e) maka ikikere nke ọtụtụ ndị ọrụ: n'ihe metụtara usoro ihe ọdịyo na vidiyo: ịme, ịchekwa ma kpọọ nnomi nke ihe ọmụmụ gị na ihe karịrị 9 desktọọpụ, laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa ndetu, ekwentị mkpanaaka, kọmputa mbadamba, ndị egwuregwu mgbasa ozi ma ọ bụ ngwaọrụ ndị yiri ya. ;
(f) maka Ikike Otu n'otu: ibipụta akwụkwọ abụọ nke ihe ọ bụla edere ede akwụkwọ maka naanị iji gị;
(g) maka ikikere ndi nwere otutu ihe: ibiputa akwukwo isii nke ihe edere ede edere obula maka iji aka gi; na
(h) mbipụta obibi akwụkwọ maka Ikike anaghị emetụta maka ịme ọpụpụ maka ebumnuche nkuzi. N’okwu ndị a, njedebe ụmụ akwụkwọ 1000 na-emetụta.
6.4 Ihe eji eme ihe nke ihe omuma gi bu:
(a) mbipụta, ọrịre, ikikere, inye ikikere, inye ego, ịgbazite, nyefe, nnyefe, mgbasa ozi, nkesa ma ọ bụ nkesa nke ihe ọ bụla (ma ọ bụ akụkụ ya) n'ụdị ọ bụla;
(b) iji ihe obula (ma obu akuku ya) n’uzo obula nke megidere iwu ma obu mebie ikike mmadu n’usoro iwu n’usoro iwu obula, ma obu n’uzo obula, nke adighi nma, ndi na akpa oke ma obu ndi ozo;
(c) iji ihe eji eme ihe (ma obu akuku ya) iji merie anyi, ma obu uzo ozo na
(d) iji ahia obula (ma obu akuku ya). Akụkụ a anaghị egbochi nnyefe nke nkuzi dabere na ihe ndị a, na-enye na ọ nweghị ihe ọ bụla na Nkebi nke 6.4 a ga-egbochi ma ọ bụ gbochie gị ma ọ bụ onye ọ bụla ịme ihe ọ bụla iwu kwadoro.
6.5 warrant na-enye anyị ikike na ị nwere ike ịnweta sistemụ kọmputa dị mkpa, sistemụ mgbasa ozi, ngwanrọ na njikọ netwọkụ ịnata ma rie uru nke ihe ọmụmụ gị.
6.6 Ikike ikike ọgụgụ isi na ikike ndị ọzọ na usoro ihe ọmụmụ ekwupụtaghị na usoro na ọnọdụ ndị a ka edobere.
6.7 Ikwesiri ijide, ma ghara ihichapụ, zoo ma ọ bụ wepu, ọkwa nwebisiinka na ọkwa ndị ọzọ nwere na ma ọ bụ na ihe ọ bụla.
6.8 Ikike ndị enyere gị na Usoro na Ọnọdụ ndị a bụ nke gị. Ekwela ka ndi ọzọ mee ikike a. Ikike enyere gị maka ikikere nke ọtụtụ ndị ọrụ nwere oke na ụlọ ọrụ ịzụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ekwela ka ndi ọzọ mee ikike a.
6.9 Amachibidoro ojiji nke ihe ndị a na ụmụ akwụkwọ 1000 kwa License.
6.10 Ọ bụrụ na ị daa iwu ọ bụla nke Usoro na Ọnọdụ ndị a, mgbe ahụ Akwụkwọ ikike ahụ edere na Nkebi nke 6 a ga-akwụsị ozugbo na ụdị mmebi ahụ.
6.11 Inwere ike ịkwụsị Ikike enwetara na Nkebi nke 6 site na ihichapụ akwụkwọ niile dị mkpa dị n'aka gị ma ọ bụ njikwa gị.
6.12 Mgbe ngwụsị nke Ikike n'okpuru Nkebi nke 6 a, ị gharịrị, ọ bụrụ na ịmebeghị nke a, kpochapụ ngwa ngwa na sistemu kọmputa gị yana ngwaọrụ eletrọniki niile akwụkwọ niile dị mkpa dị na njide ma ọ bụ njikwa gị, na kpamkpam bibie akwụkwọ ọ bụla ọzọ dị mkpa maka ihe ndị ị nwere ma ọ bụ njikwa gị.
7. Anya nkwekọrịta: ikike kagbuo ikike
7.1 Nkebi nke 7 a metụtara ma ọ bụrụ naanị ma ọ bụrụ na ị na-enye nkwekọrịta anyị, ma ọ bụ soro anyị nkwekọrịta, dị ka onye na - azụ ahịa - ya bụ, dị ka onye na - eme ihe kpamkpam ma ọ bụ ọkachasị n'azụ ahịa gị, azụmahịa gị, ọrụ aka gị.
7.2 may nwere ike ịdọrọ onyinye ịbanye na anyị na nkwekọrịta site na weebụsaịtị anyị, ma ọ bụ kagbuo nkwekọrịta anyị na anyị banye na weebụsaịtị anyị, n'oge ọ bụla n'ime oge:
(a) malite na ntinye nke onyinye gị; na
(b) na-ejedebe na njedebe nke 14 ụbọchị mgbe ụbọchị nke nkwekọrịta ahụ gasịrị, dabere na Nkebi nke 7.3. Ikwesighi inye ihe kpatara iwepu ma obu iwepu gi.
7.3 agree kwenyere na anyị nwere ike ịmalite ịnye ihe ngwongwo tupu oge a kpọtụrụ aha na Nkebi 7.2. Kwenyere na, ọ bụrụ na anyị amalite ịnye usoro ihe omume tupu njedebe nke oge ahụ, ị ​​ga-atụfu ikike ịkagbu nke akọwapụtara na Nkebi 7.2.
7.4 Iji wepu onyinye ị ga-eme ma ọ bụ kagbuo nkwekọrịta na-akọwa na Nkebi nke 7 a, ị ga-agwarịrị anyị mkpebi gị ịhapụ ma ọ bụ kagbuo (dịka ikpe nwere ike ịbụ) Nwere ike ịgwa anyị site na nkwupụta doro anya ọ bụla na-akọwa mkpebi ahụ. N'ihe banyere ịkagbu, ị nwere ike ịgwa anyị site na iji bọtịnụ 'Iwu' na Akaụntụ M. Nke a ga - enyere gị aka ịmalite usoro iji kwụghachi nzụta gị. Iji mezuo oge ịkagbu, ọ ga-ezuru gị iziga nkwukọrịta gị gbasara ngosipụta nke ikike ịkagbu tupu oge ịkagbu akagbuola.
7.5 Ọ bụrụ na ị kagbuo iwu na ndabere nke akọwara na Nkebi nke 7 a, ị ga-enweta nkwụghachi zuru ezu nke ego ị kwụrụ anyị maka iwu ahụ. Ọ bụrụ na ịkwụghị ego ọ bụla iji mezue iwu ahụ, ego agaghị akwụghachi.
7.6 Anyị ga-akwụghachi ego site na iji otu usoro eji akwụ ụgwọ ahụ, belụsọ na ikwenyela n'ụzọ ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ị gaghị eweta ụgwọ ọ bụla n'ihi nkwụghachi.
7.7 Anyị ga-edozi nkwụghachi ụgwọ ahụ maka gị site na ịkagbu na ndabere a kọwara na Nkebi nke a 7. Ọ ga-abụ n'egbughị oge ọ bụla, yana, otu ọ dị, n'ime oge 14 ụbọchị mgbe ụbọchị nke agwachara anyị. nke akagbuo.
7.8 Ozugbo a rịọrọ nkwụghachi ma kwenye, a ga-akagbu ihe nbudata niile anaghị eji.
8. Akwụkwọ ikike na nnọchite anya
8.1 warrant na-akwado ma na-anọchite anya anyị na:
(a) ị nwere ikike ịbanye na nkwekọrịta nkwekọrịta;
(b) inwere ikike zuru oke, ike na ikike ikwenye na Usoro na Ọnọdụ ndị a; na
(ch) ozi niile ị nyere anyị maka usoro gị bụ eziokwu, ziri ezi, zuru ezu, ugbu a na-abụghị iduhie.
8.2 Anyị na-ekwe gị nkwa na:
(a) ihe omumu gi gha adi nma;
(b) ihe omumu gi gha adi nma karie ebumnuche obula igosiputara anyi tupu emee nkwekọrịta n'okpuru Usoro na Ọnọdụ a;
(c) ihe omume gị ga - adaba na nkọwa ọ bụla nke anyị nyere gị; na
(d) anyi nwere ikike iji nye gi ihe omumu gi.
8.3 Edebere akwụkwọ ikike na nnọchi anya niile gbasara ihe eji arụ ọrụ na Usoro na Ọnọdụ ndị a. Ruo oke oke iwu enyere ma dabere na Nkebi 9.1, a na-ewepụ ikike ikike na nnọchi anya ndị ọzọ niile.
9. Oke na nwepu ibu ibu
9.1 Onweghị ihe dị na Usoro na Ọnọdụ ndị a:
(a) belata ma ọ bụ wezuga iwu ọ bụla maka ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ nke enweghị ọrụ;
(b) belata ma obu wepu iwu obula maka igha wayo ma obu igha wa ugha;
(c) belata oke iwu ọ bụla n'ụzọ ọ bụla na-anaghị ekwe ka iwu dị; ma ọ bụ
(d) ewepu ugwo obula nke agagh ewepu n’okpuru iwu di nkpa, ma, oburu na ibu onye ahia, ikike gi nke iwu agaghi ewepu ma o bu kpa ya oke site na Usoro na Onodu a, ewezuga oke iwu nyere.
9.2 Mmachi na mwepu nke ibu edere na Nkebi nke 9 na ebe ndị ọzọ na Usoro na Ọnọdụ ndị a:
(a) dabere na Nkebi nke 9.1; na
(b) na-achịkwa ụgwọ niile na-esite n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a ma ọ bụ metụtara isiokwu nke Usoro na Ọnọdụ ndị a, gụnyere ụgwọ ndị na-esite na nkwekọrịta, na njedebe (gụnyere nleghara anya) yana maka ịda iwu nke ọrụ iwu, belụsọ n'ogo ekwuputara na uzọ ọzọ n'ime ndị a.
9.3 Anyị agaghị atụkwasị gị ụgwọ maka mfu ọ bụla na-esite na mmemme ọ bụla ma ọ bụ ihe omume karịrị ike anyị.
9.4 Anyị agaghị atụ gị ụtụ n'ihe metụtara mfu ọ bụla azụmaahịa, gụnyere (na-enweghị mmachi) ọnwụ ma ọ bụ mmebi nke uru, ego, nbata, ojiji, nrụpụta, atụmanya echekwara, azụmaahịa, nkwekọrịta, ohere azụmaahịa ma ọ bụ ihu ọma.
9.5 Anyị agaghị akwụ gị ụgwọ maka ọnwụ ma ọ bụ nrụrụ aka nke data ọ bụla, nchekwa data ma ọ bụ ngwanrọ ọ bụla, na-enye na ọ bụrụ na ị ga-eso anyị banye n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a dịka onye na-azụ ahịa, Nkebi nke 9.5 agaghị etinye.
9.6 Anyị agaghị atụ gị ụgwọ maka mbibi ma ọ bụ mmebi ọpụrụiche ọ bụla, nke na-enweghị isi ma ọ bụ nke nwere ike ịda, na-enye na ọ bụrụ na ị ga-eso anyị banye n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a dị ka onye na-azụ ahịa, Nkebi 9.6 a agaghị emetụta.
9.7 I nabatara na anyi nwere mmasi igbochi ikike nke ndi isi anyi na ndi oru ayi. Yabụ, n'ihe metụtara mmasị ahụ, ị ​​nabatara na anyị nwere ikike dị oke mkpa; ị kwenyere na ị gaghị eweta nkwupụta ọ bụla n'onwe gị megide ndị isi ọrụ anyị ma ọ bụ ndị ọrụ anyị n'ihe gbasara ọghọm ọ bụla ị tara na njikọ weebụsaịtị ma ọ bụ Usoro na Ọnọdụ ndị a (nke a agaghị, amachibido ma ọ bụ wepu ibu ọrụ nke ikike dị ụkọ n'onwe ya maka omume na omume ndị isi na ndị ọrụ anyị).
9.8 Nchịkọta nchịkọta anyị nyere gị gbasara nkwekọrịta ọ bụla iji nye gị ọrụ n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a agaghị agafe nke ka ukwuu:
(a) £ 100.00; na
(b) ego niile a kwụrụ na nke a ga-akwụ anyị n'okpuru nkwekọrịta ahụ.
(c) ma ọ bụrụ na ịkwụghị ego ọ bụla iji budata akụrụngwa anyị, mgbe ahụ, ụgwọ kachasị mkpokọta anyị gbasara gị n'ihe gbasara nkwekọrịta ọ bụla iji nye ọrụ ga-edozi na 1.00 XNUMX.
10.1 Anyị nwere ike ịmegharị Usoro na Ọnọdụ ndị a site n'oge ruo n'oge site na mbipụta mbipute ọhụrụ na weebụsaịtị anyị.
10.2 Ntughari nke Usoro na Ọnọdụ ndị a ga-emetụta na nkwekọrịta ndị etinyere n'oge ọ bụla na-esote oge nyochagharị mana ọ gaghị emetụta nkwekọrịta emere tupu oge mmegharị ahụ.
11. Ihe omume
11.1 You kwenyere ugbu a na anyị nwere ike ekenye, nyefee, nkwekọrịta ma ọ bụ na-enweghị ike ịchịkwa ikike anyị na / ma ọ bụ ọrụ anyị n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a - na-enye, ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa, na ụdị omume ahụ anaghị arụ ọrụ iji belata nkwa ndị na-erite uru na gị n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a.
11.2 gaghị enwerịrị ọrụ nkwenye edere edepụtara, nyefe, nkwekọrịta ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ na-emeso ikike na / ma ọ bụ ọrụ gị n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a.
12. Anaghị efe efe
12.1 Enweghị mmebi nke ndokwa ọ bụla nke nkwekọrịta n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a ka a ga-agbaghara belụsọ na nkwupute nkwenye ederede nke ndị otu na-emebighị.
12.2 Onweghi iwepu mmebi obula nke nkwekorita obula nke nkwekorita n’okpuru usoro na onodu a ka aghota dika ogha n’iru ma obu ngbaghari iru uzo ozo ma obu mmebi iwu obula ndia.
13.1 Ọ bụrụ na ndokwa nke Usoro na Ọnọdụ ndị a kpebiri site n'ụlọ ikpe ọ bụla ma ọ bụ ikike ndị ọzọ tozuru oke ịbụ nke iwu na-akwadoghị na / ma ọ bụ na-enweghị ike ịmanye ya, usoro ndị ọzọ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
13.2 Ọ bụrụ na ndokwa na iwu na / ma ọ bụ na-enweghị ike ịkwado Iwu na Ọnọdụ ndị a ga-abụ nke iwu ma ọ bụ mezuo iwu ma ọ bụrụ na ehichapụ akụkụ ya, akụkụ ahụ ga-adị ka ehichapụ ya, ma ndokwa ndị ọzọ ga-aga n'ihu na mmetụta.
14. Ikike nke atọ
14.1 Otu nkwekọrịta n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a bụ maka ọdịmma anyị na uru gị. Ebughị n'obi ka ọ baara ndị ọzọ uru ma ọ bụ mee ya eme.
14.2 Omume nke ikike ndị ọzọ n'okpuru nkwekọrịta n'okpuru Usoro na Ọnọdụ a abụghị n'okpuru nkwenye nke ndị ọzọ.
15. Ofu nkwekọrịta
15.1 Dabere na Nkebi nke 9.1, Usoro na Ọnọdụ ndị a ga-abụ nkwekọrịta niile dị n'etiti gị na anyị gbasara ire na ịzụta nke nbudata anyị (gụnyere nbudata na-akwụghị ụgwọ) na ojiji nke nbudata ndị ahụ, ma ga-agbanwe nkwekọrịta niile gara aga n'etiti gị na gị. anyị n'ihe metụtara ire na ịzụta ihe nbudata anyị na ojiji nke nbudata ndị ahụ.
16. Iwu na ikike
16.1 Usoro na Ọnọdụ ndị a ga-achịkwa ya ma mee ya dịka iwu ndị Scotland si kwuo.
16.2 Esemokwu ọ bụla metụtara Usoro na Ọnọdụ a ga-anọ n'okpuru ikike naanị nke ụlọ ikpe nke Scotland.
17. Ngosipụta usoro iwu na usoro
17.1 Anyị agaghị etinye akwụkwọ nke Usoro na Ọnọdụ ndị a kpọmkwem n'ihe metụtara onye ọrụ ọ bụla ma ọ bụ onye ahịa ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị melite Usoro na Ọnọdụ a, mbipute nke ị kwere na mbụ agaghị adị na weebụsaịtị anyị. Anyị na-akwado ka ị tụlee ịchekwa otu Usoro na Ọnọdụ a maka ntụnyere n'ọdịnihu.
17.2 Okwu na Ọnọdụ ndị a dị naanị n'asụsụ Bekee. Agbanyeghị GTranslate dị na weebụsaịtị anyị, anyị anaghị ewere ọrụ ọ bụla maka ogo ntụgharị asụsụ nke Usoro na Ọnọdụ ndị ụlọ ọrụ a rụpụtara. Asụsụ Bekee bụ naanị ụdị nke iwu kwadoro.
17.3 Anyị anaghị edebanye aha maka VAT.
17.4 Weebụsaịtị nke ikpo okwu esemokwu ntanetị na European Union dị na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Enwere ike iji ikpo okwu esemokwu dị n'ịntanetị iji dozie esemokwu.
18. Anyị nkọwa
18.1 Ndi Reward Foundation bu ndi nwe ma na-aru oru a.
18.2 E debanyere aha anyị na Scotland dị ka Scottish Charitable Incorporated Organisation n'okpuru nọmba ndebanye aha SCO 44948. Ourlọ ọrụ anyị debara aha bụ na The Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR, Scotland, UK.
18.3 Isi ahia anyị bu na Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR, Scotland, UK.
18.4 can nwere ike ịkpọtụrụ anyị:
(a) site na nzipu ozi, na-eji adreesị nzipu e nyere n’elu;
(b) n'iji ụdị kọntaktị weebụsaịtị anyị https://rewardfoundation.org/contact/;
(c) site na ekwentị, na nọmba ịkpọtụrụ bipụtara na weebụsaịtị anyị site n'oge ruo n'oge; ma ọ bụ
(d) site na email, na-eji kpọtụrụ@rewardfoundation.org.
Dị - 21 October 2020.